Chelsea oo ku dhow inay la soo wareegto Demba Ba
Home Sports Chelsea oo ku dhow inay la soo wareegto Demba Ba
Kooxda Chelsea ayaa ku soo biirtay kooxaha sida wayn u raadinaya weerrar yahanka kooxda Newcastle Demba Ba.
Sida ay lee yihiin warbaahinta waddanka Ingiriiska 27-jirkan Ba, waxa la sheegay in uu wadahaddal la furay kooxda Chelsea maanta oo Arbaca ah, sidoo kale waxa la sheegay in uu ka maqnaan doono kulanka kooxdiisa ay la yeelaneyso naadiga Everton.
Waxa la aamisan yahay in uu heshiis la gaari doono kooxda Chelsea, iyadoona uu kooxdaas kula wareegi doono adduun lacageed oo gaaraya illaa £7m.
Xiddiggan reer Senegalese, ayaa kaga soo biiray kooxda Newcastle kooxda West Ham bishii June 2011, waxa uu hadda yahay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan horiyaalka Ingiriiska ee Premier League waxana uu dhaliyay 13 gool.
Kooxda Newcastle ayaa isku dayeesa in ay wadaxaajood la yeelato ciyaaryahanka reer Senegal si ay heshiis cusub ula gaarto bishan January oo uu furay suuqa ciyaartoyda lagu kala wareego.
Goor hore oo toddobaadkan ah ayaa maamulka kooxda Alan Pardew wuxuu rajo fiican ka muujiyay in ciyaar yahan Ba uu joogi doono kooxda.
Kaddib markii ay la soo wareegta Liverpool xiddiggii kooxda Chelsea Daniel Sturridge, Ba ayaa loo arkay ciyaaryahanka buuxin karaa booska uu faarujiyay 23-jirka reer England striker oo hadda ka tagay garoonka Stamford Bridge.
Ciyaaryahanka ku dhashay waddanka Fraansiiska Ba ayaa ciyaarihiisa ka soo bilaabay dalka Faraniiska, laakin sannadkii 2007-da ayuu u wareegay kooxda Germalka ee Hoffenheim .